Knowledge – EverBestMM
ဒီနေ့ နလေ့ညျတုနျးက ဆိုငျကယျနဲ့ မိနျးနား သှားရငျး ဘီးပေါကျပါလရေော။ အဲ့ဒီတော့ တှနျးပေါ့လေ။ပထမဆုံးတှတေဲ့ဆိုငျက အဖိုးကွီးတဈယောကျ သူကကွညျ့ပွီး ကြှတျလဲရမှာတဲ့။ကလဈဆိုငျကယျမို့ သူမဖွုတျပေးနိုငျဘူးတဲ့။ ခကျတယျတဲ့။ ဟုတျတယျ။ Click ဆိုငျကယျတှကေ နောကျဘီးဖွုတျရတာခကျတယျ။ ရှနေ့ားမှာ ဘီးဖာတဲ့ ဆိုငျရှိတယျ တဈပွပဲဆိုတာနဲ့ ဆကျတှနျးသှားလိုကျတာ ၆၉လမျးနဲ့ ၃၉ လမျးဆုံမှာ ဒီဆိုငျလေးတှပေ့ါလရေောဗြာ။ဘီးဖာပေးတဲ့ဆရာက အသကျ ၁၀
ဘဝ တိုးတကျ စမေညျ့ နညျးလမျး (၁၁) ခကျြ (အ ရမျး ကောငျး ပါ တယျ)….
“ဘဝ တိုးတကျစမေညျ့ နညျးလမျး (၁၁) ခကျြ” ၁။ ဘာလုပျမလဲ အရငျ စဉျးစားပါ၊ စဉျးစားပွီး မှ လလေ့ာပါ၊ လလေ့ာပွီးမှလုပျဆောငျပါ၊ လုပျဆောငျပွီးရငျလညျး ပွနျလညျသုံးသပျပါ။ ၂။ ကိုယျနခေငျြ တဲ့ အဆငျ့ကို ကိုယျ တိုငျ သတျမှတျပါ။ ၃။ ကိုယျမွငျ သလောကျပဲ ကိုယျရပါ လိမျ့မယျ။ ၄။
Ever Y | July 24, 2020
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြု သူတွေ အင်တာနက် ဘယ်လို သုံးလိုက်တယ်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု နှုန်းထားကို တိကျစွာ သိရှိဖို့အပြင် အင်တာနက် သုံးစွဲချိန်တိုင်းမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ပမာဏများအတွင်းမှ ဒေတာများ လျော့နည်းသွားခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုပေမဲ့ ဖုန်းဘေလ် တွေ ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းတွေက ကင်းဝေးနိုင်စေဖို့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေ အနေဖြင့် ယခုဖော်ပြမယ့်ွှရာတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ် …။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရာတွင်
ကွမ်းစား တဲ့ သူတွေ သိ ရင် အရမ်း ကို အော်ဂလီဆန် သွားစေ မယ့် ကွမ်းသီး တွေ ရဲ့ အဖြစ် မှန်
Ever Y | July 20, 2020
မြန် မာနိုင်ငံမှာ ကွမ်းယာစားသုံးသူ ပမာဏ တဖြေးဖြေးနဲ့ တိုးပွား လာနေခဲ့ပါပြီ။ ထိုသို့ တိုးတက်လာသော စားသုံးသူ အရေအတွက်ကို ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်စေရေး အတွက် စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ကြိုးပမ်း လာကြပါတယ်။ ထုံးကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဖောက်တာ ၊ ကွမ်းသီးတွေကို ဓာတုဗေဒဆေးတွေနဲ့ အရောင်ချွတ်တာ မျိုးစုံအောင်ပါပဲ။ ဒီလိုပဲ
မိမိ ချစ်သူ ၊ မိမိ လင်ေ ယာင်္ကျား ဘီယာ ၊အရက် ပြတ်စေ လိုလျှင်
Ever Y | July 19, 2020
လင်အမျိုး သား ဘီယာအရက်သောက်လာလို့စိတ်ညစ်နေရပါသလား…? တခါမှမသောက်ဖူးတဲ့အမျိုးသား သောက်လာတာသိလို့ ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲစိတ်ညစ်နေရပါသလား…? ချစ် ရယ်…သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တခါတရံပျော်လာခဲ့တာပါကွာ. . .ဆိုပြီးအကြိမ်ကြိမ်သောက်တာများလာလို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား…? ဟေ့…..နင့်ယောက်ျားအရင်တုန်းက မသောက်ဘူး အခုသောက်တတ်လာနေပြီနော်…… ဆိုပြီး အပြောခံနေရ မျက်နှာငယ်နေရပါသလား…? သောက်စားမူးပြီး အိမ်မှာမိသားစုကိုရမ်းကား ရန်ရှာ ပြဿနာရှာနေလို့ စိတ်ညစ်နေရပါသလား…? မိမိအမျိုးသားကို အရင်လိုပဲ အကောင်းဘက်ကိုပြန်ရောက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ…………? ဆိုပြီး